Amanqaku okuSebenza kwezixhobo zeBhiya yobugcisa-Iindaba-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Amanqaku okuSebenza kwezixhobo zeBhiya yoBugcisa
Ixesha: 2020-07-10 I ngxelo: 73
Kwii-novices ezininzi, kukho izinto ekufuneka uzazi xa usebenzisa isixhobo, apha ndingathanda ukwabelana ngeengcebiso malunga nendlela yokusebenzisa isixhobo:
Isixhobo se-Craft se-Beer esifakiweyo masingaze sithambeke, kufuneka sihlale sime nkqo, kwaye nentshukumo ayicetyiswa. Ukuba kufuneka ushukume, ukhuphe iplagi kwaye umise umbane, kwaye ume nkqo ngelixa ushukuma.
2.Ukuba izixhobo zobhiya kufuneka zenziwe ngononophelo. Xa ukupheka kugqityiwe, cofa iplagi yamandla, ucime iswitshi kwibhotile ye-co2 kwaye ubuyisele umva kwijijithi yoxinzelelo. Ungabaphazamisi ngokwakho, okanye bazokwaphuka ngokulula.Ukuba ayisasetyenziswanga kwithuba elifutshane, umatshini kufuneka akhutshwe amanzi, kwaye acoce udonga lwangaphandle, emva kokupakisha kwindawo eyomileyo.
Isixhobo seebhiya esenziwe ngobuchule kufuneka sihlolwe rhoqo ukugcinwa komgangatho wamanzi kunye nomgangatho wamanzi etankini, ukuba kukho imfuneko, ngokucoca isikhuseli esikhethekileyo, ngoko ke kufuneka uhlambe ngamanzi. Qaphela ukuba ungatshizi amanzi kwimoto.Jonga kwakhona isixhobo sokucoca kunye nentloko yewayini rhoqo. Ukuba i-gasket ayinakutya, kufuneka ibuyiselwe.
Ukuba unemibuzo engaphezulu, unokujonga iwebhusayithi yethu www.coffbrewing.com/faqs. okanye ungandithumelela i-imeyile (wellish@nbcoff.com), ndiza kuzama konke okusemandleni ukukunceda.
Previous: IziBonelelo zeNkcubeko eziHlanganisiweyo Abasebenzi nabaThengi
Okulandelayo: Ukuveliswa kweBhiya yobugcisa-Uhlobo oludibeneyo lweNkqubo yokuNgcweliswa-izixhobo zezixhobo ezibini